Home News Feysal Cali Waraabe oo si kulu ugu jawaabay Madaxweyne Biixi kana hadlay...
Feysal Cali Waraabe oo si kulu ugu jawaabay Madaxweyne Biixi kana hadlay wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland
Faysal Cali Waraabe Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Somaliland ee UCID ayaa maanta ka hadlay hadalkii Muuse Biixi uu ka sheegay Burco ee ahaa in la joojiyay wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in Muuse Biixi uusan joojin karin wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya,waxaana uu sheegay in wada hadallo ay sii socon doonaan tan iyo inta labadda dal ay kala baxayaan.
Faysal ayaa waxaa uu tilmaamay in hadalkii Muuse Biixi uu ahaa Mid Caadifad ah, islamarkaana ay haboon tahay in Soomaaliya iyo Somaliland ay iskaashaddaan.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Magaalada Burco kaga dhawaaqay in guud ahaan Somaliland ay joojisay wada hadalladdii dowladda Dhexe ee Soomaaliya iyo Somaliland.
Previous articleCiidamada uu hogaaminayo Korneel Caarre oo la wareegay Deegaanka Ceel-Afweyne
Next articleJubbaland oo ka hadashay nabadoon lagu dilay Gobolka Gedo
Maxaad ka Ogtahay Sababta Xilka looga qaaday Cabdiraxiin Iimaan?
Ganacsade caan ahaa oo lagu toogtay Deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka...